Doofaarka Khudaarta vs Doofaarka Dhabta ah: Habka Korinta Doofaarka Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Doofaarka Khudaarta vs Doofaarka Dhabta ah: Habka Korinta Doofaarka Cusub
Hidaha Hidaha ee Hong Kong
Hilibka khudradda ayaa duufaan ku dhufatay Hong Kong waxaana loo arkaa mid ka mid ah doorashooyinka ugu sarreeya ee cunto caafimaad leh. Iyadoo taas la yiraahdo, doofaarradu waxay ku dhaqdaan gudaha gudaha Hong Kong Heritage Pork aasaasaha John Lau Hon Kit hababka taranta cusub waa kuwo cusub, dabiici ah iyo hormoon la'aan. Qiimaha nafaqada ee hilibka doofaarka dhabta ah ee sidan oo kale ah ayaa aad uga hooseeya kan beddelka hilibka doofaarka ee khudradda. Doofaarka Tai Chi ee uu dhalay John Lau Hon Kit waxaa ka buuxa nafaqooyin, dhadhan fiican leh, waxayna dhadhanka hilibka doofaarka deegaanka ka dhigaan mid aan la ilaawi karin.
John Lau Hon Kit wuxuu hubinayaa in dhammaan doofaarrada lagu koray beerihiisa lagu quudiyo quudin tayo sare leh oo keliya oo aan ku jirin hormoonno lagu daray iyo daroogo aan loo baahnayn ama xad dhaaf ah. Natiijo ahaan taranta adag iyo habka korinta, wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro hilibka doofaarka ee tayada ugu sarreeya ee dabiiciga ah, caafimaad leh iyo dhadhanka. Dhammaan quudinta doofaarradiisa waxa lagu keenaa mishiin quudin ah oo laga keeno Danmark kaas oo tayadiisa ay caddeeyeen Midowga Yurub. Waxaa intaa dheer, biyaha la cabbo ee doofaarradu waxay ka yimaadaan Buurta Lau Fau Shan, oo ah il biyo leh oo qani ku ah macdanta.
Marka la barbardhigo hilibka doofaarka khudradda ah ee hadda suuqa ku jira, John Lau Hon Kit wuxuu ku adkaysanayaa in hawl-galkiisa hal-abuurka leh iyo sayniska- taageeray iyo hababka taranka ay si wax ku ool ah u hubin karaan in tayada doofaarku ay tahay heerka ugu sarreeya, cufan nafaqeynta iyo dhadhanka. Inta badan hilibka khudradda ayaa loo baahan yahay in lagu farsameeyo milix, saliid iyo walxaha kale ee dhadhanka si loo ekaysiiyo dhadhanka iyo dhadhanka hilibka dhabta ah, taasoo keentay in ay ku jirto maadada sodium sare oo la mid ah cuntooyinka la warshadeeyay ama qasacadaysan. Tusaale ahaan, rootiga 100g ee hilibka khudradda ah wuxuu horeyba ugu jiray 550 mg oo sodium ah. Halka tirada isku midka ah ee hilibka doofaarka ee baruurta iyo caatada ah (aan la karinin) ay tahay kaliya 59.4 mg. Marka loo eego talooyinka Ururka Caafimaadka Adduunka, qiyaasta soodhiyamka maalinlaha ah ee qofka qaangaarka ah waa in uusan dhaafin 2000 mg, taas oo qiyaastii u dhiganta hal qaado shaaha (5 garaam) oo milix ah.
Hilibka doofaarka dhabta ah wuu ku yar yahay baruurta dheregsan
Si loo ilaaliyo heerka sare ee tayada hilibka doofaarka gudaha Hong Kong Heritage Pork Beeraha, John Lau Hon Kit wuxuu ku adkaystay hirgelinta taranta cusub iyo habka hawlgalka beerta doofaarka kaas oo u horseedaya korinta doofaarka leh quudin caafimaad iyo nafaqo leh. Kaliya maaha hilibka doofaarka ee beeraha John Lau Hon Kit ee cusub, macaan, iyo badbaado leh, laakiin qof kastaa wuu cuni karaa si kalsooni leh. Maadaama hilibka doofaarku uu si dabiici ah ugu yar yahay dufanka buuxa, hilibka John Lau Hon Kit's Tai Chi Pork waa mid dufan leh oo caato ah, taasoo la macno ah inay qani ku tahay dufan caafimaad qaba laakiin isla mar ahaantaana aan dufan lahayn. Doofaarka Tai Chi ee uu dhalay John Lau Hon Kit waxay isku daraan sifooyinka ugu fiican ee doofaarka Berkshire ee dhadhanka leh iyo jilicsanaanta doofaarka Danish Landrace, iyo midabka firfircoon ee doofaarka Duroc si ay u sameeyaan doofaarka Tai Chi ee Hong Kong Heritage Doofaarka.
Inkasta oo hilibka doofaarka khudradda uusan ku jirin kolestarool, dufanka buuxa ee ku jira ayaa aad uga sarreeya hilibka doofaarka. Waxaa intaa dheer, hilibka doofaarka khudradda ayaa inta badan laga sameeyaa soybeans, digir, bariis, saliidda cuntada, iyo soosaar khamiirka. Tani waxay dhibaato u keeni kartaa kuwa aan cuni karin cuntooyinka ay ku badan yihiin kolestaroolka ama dadka qaba xasaasiyadda cuntada sida sarreenka ama gluten.
Nidaamka taranka cusub ayaa kor u qaada doofaarrada maxalliga ah
John Lau Hon Kit waxa uu ku adkaysanayaa in uu kor u qaado doofaarkiisa Tai Chi isaga oo aan isticmaalin hormoono iyo antibiyootik waxa uu kaliya u isticmaalaa galleyda premium ee EU-da iyo soybeans ka yimid Ameerika sida quudkooda maalinlaha ah. Bilawga ilaa dhamaadka, waxa uu u heellan yahay in uu koriyo doofaarro tayo sare leh iyo bixinta suuqa Hong Kong hilib doofaar macaan oo cusub oo aan wax lagu darin.
Marka la eego hawlaha beeraha iyo tignoolajiyada taranta, John Lau Hon Kit ayaa hogaanka u qabtay soo bandhigida nooc cusub oo taranta Denmark ee Hong Kong si uu u bedelo qaabka caadiga ah ee hawlgalka beerta doofaarka. Oo ay ku jiraan naqshadaynta dufcaddii quudinta, habka amniga biometric, nidaamka qaboojinta biyaha, 24/7 la socodka tooska ah ee heerkulka qolka, iyo in ka badan.